Tulku: တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဦး "ပြန်လည်မွေးဖွား" မာစတာ
တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်လည်မွေးဖွားမာစတာ: တစ် Tulku
အဆိုပါစကားလုံး tulku "အသွင်ပြောင်းရေးကိုယျခန်ဓာ," သို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ဦးတိဘက်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် " nirmanakaya ။ " တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တစ်ဦး tulku တစ်ကွယ်လွန်သူသခင်၏ emanation အဖြစ်ဖော်ထုတ်ထားပြီးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနွယ်ရှည်လျားရာစုနှစ်များစွာရှိနိုင်ပါသည်, ထိုစနစ်၏အမျိုးမျိုးသောကျောင်းများသောသွန်သင်ချက်နိယာမနည်းလမ်းများကမ်းလှမ်း တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာ ။ အဆိုပါ tulku စနစ်ကဗုဒ္ဓဝါဒ၏အခြားအခက်မတည်ရှိပါဘူး။
အဟောင်း tulku ၏အသေခံခြင်းအပေါ်မှာ၎င်း, လေးစားဖွယ် Lama ၏အုပ်စုတစုငယ်ရွယ်ဝင်စားရန်ရှာတွေ့အတူတကွစုဝေးစေတော်မူ၏။ သူတို့ကသေလွန်သောသူတို့သည် tulku သူပြန်လည်မွေးဖွားလိမ့်မယ်လို့ရှိရာညွှန်ပြမက်ဆေ့ခ်ျထွက်ခွာသွားကြောင်းဆိုင်းဘုတ်များရှာပေမည်။ ထိုကဲ့သို့သောအိပ်မက်ကဲ့သို့အခြားဆန်းကြယ်မှုများအရိပ်လက္ခဏာ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ သူတို့ငယ်ရွယ်သားဖြစ်ကြ၏သည့်အခါ Tulkus အများဆုံးမကြာခဏဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ အများစုက, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်, tulkus အထီးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအပါအဝင်တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် tulku နွယ်၏နံပါတ်ရှိပါသည် ဒလိုင်းလားမား နှင့် Karmapa ။
သူသာလေးနှစ်အရွယ်မှာလက်ရှိဒလိုင်းလားမား Lhamo Döndrubအဖြစ် 1937 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးယခုနှစ် 1391. ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့တဲ့နွယ်အတွက် 14, 14 ဒလိုင်းလားမား 13 ဒလိုင်းလားမား၏ tulku အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သူတို့ကိုဟုဆိုကာ, 13 ဒလိုင်းလားမားပိုင်အောင်မြင်စွာဖော်ထုတ်ပစ္စည်းများရှိသည်ဟုဆိုသည်။
ဖော်ထုတ်ခံရပြီးနောက် tulku သူ့မိသားစုကနေခွဲခြားနှင့်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်အစေခံကျွန်ကဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာကြီးပြင်းနေပါတယ်။
သူကရှုပျထှေးထုံးတမ်းသိတော့နှင့်တဖြည်းဖြည်းယခင် tulku ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားယူဆအဖြစ်ဒါဟာအထီးကျန်ဘဝဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လေထုငယ်ရွယ်မာစတာဘို့ဆည်းကပ်နှင့်ချစ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Tulkus မကြာခဏသခင် "ဝငျစား", ဒါပေမယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာအရသိရသည်စိတ်ဝိညာဉ်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမာစတာတစ်ဦးပြန်လည်မွေးဖွားသို့မဟုတ် transmigrated "ဝိညာဉျသ," မဟုတျကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဟုခေါ်ကြသည်တည်ရှိဖို့ကဆိုပါတယ်မရနိုင်ပါ။
အစားဝငျစားအသက်ဝိညာဉ်၏, ထို tulku (တွေ့မြင် nirmanakaya ပုံစံအတွက်ဉာဏ်အလင်းမာစတာတစ်ဦးပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ထင်နေသည် trikaya ) ။
ပြည်သူ့မကြာခဏ lama အတူဝေါဟာရကို tulku ရှုပ်ထွေး။ တစ်ဦးက lama တစ် tulku ဖြစ်သူကို may, ဒါမှမဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါ, ဝိညာဏမာစတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ '' Stuff '' ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကိုဘယ်လို
Goindwal Baoli, Goindwal ၏ကောင်းပြီ
Acupressure ဘဏ္ဍာ - zu စန်းလီ - အစာအိမ် 36
ဘယ်လိုနှောင်းပိုင်းငါ Mass မှာရောက်ရှိနှင့်တိုင်သဟာယလက်ခံနိုင်ပါသလား?
တစ်ဦးကိုနှစ်ချက် Entender ဆိုတာဘာလဲ
အာကာသယာဉ်မှူးဒစ်ခ် Scobee: အ Challenger တစ်ခုမှာ 7
ဂါဗြေလ Prosser ရဲ့ကြံစည်မှု
"လူနှင့်အက Superman" လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
Facebook ကကို Maintenance ဖေဖော်ဝါရီလ 29, 30, 31, အဘို့အပိတ်?
Penn GPA, SAT ရမှတ်များနှင့် ACT ရမှတ်
ရပ်ကွက်များနှင့်လောင်းကြေး Directories အွန်လိုင်းနှင့်အမြဲတမ်းလက်ရှိ Are!
Franco-Prussian စစ်ပွဲ: ကွင်းဆင်းမာရှယ် Helmuth ဗွန် Moltke ဟာအသက်ကြီး
Abelard နှင့် Heloise: သမိုင်းဝင်မိတ်ဆွေတို့ကို၏အမွေအနှစ်
2015 နိုင်ငံတော်အားဖြင့် SAT ရမှတ်များ
ဘယ်လိုဆွဲပါရန်နှင့် Sketch ကြောင်
လူအားလုံးတို့သည်ခက်ရော့ခ်တီးဝိုင်း '' Seether '' အကြောင်း
အကောင်းဆုံး Beatles မတ်ေတာသသီချင်းများ 10 ပို
Panth: ဆစ်ခ် Society ၏ဝိညာဉျ Path ကို
အခမဲ့အလယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့် RC လေယာဉ်ပျံစီစဉ်